Browser တိုင်းမှာ Cache တွေ ဘယ်လိုရှင်းကြမလဲ?? – DigitalTimes.com.mm
153 Shares 88 Views
ဘယ် Browser တိုင်းမှာမဆို Setting ရဲ့ Privacy or History ကနေ ဝင်ပြီး cache တွေကို ဖျက်ပစ်လိုက်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာလို့ cache တွေ ရှင်းပေးဖို့လိုတာလဲ?? Cache ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတွေနဲ့ ဘယ်လိုရှင်းပေးရမလဲဆိုတာတွေကို browser တစ်ခုချင်းစီလိုက်ပြီး ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Browser ရဲ့ Cache ဆိုတာကလည်း ကိုယ်ဝင်ကြည့်ဖူးတဲ့ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေက စာတွေ ပုံတွေနဲ့ သူ့မှာပါတဲ့တခြားသော content တွေအကုန်လုံးကို စုထားပြီး ကွန်ပျူတာရဲ့ hard drive ဒါမှမဟုတ် ဖုန်းမှာဆို storage မှာသွားသိမ်းထားတာပါ။
ဝဘ်ပေ့ခ်ျတွေရဲ့ copy က ကိုယ့် device ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွက် နောက်တစ်ကြိမ် အဲဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကိုဝင်တဲ့အခါမှာ အင်တာနက်ကနေ နောက်တစ်ခါထပ်ဒေါင်းလုပ်ချစရာမလိုဘဲနဲ့ ဖုန်းသို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာကနေပဲ ပြန် load လုပ်သွားတဲ့အတွက် ဝင်ရတာမကြာတော့ပဲ မြန်သွားပါတယ်။
Cache တွေကို ဘယ်ချိန်ရှင်းမလဲဆိုတော့ ကိုယ်က ဒီဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ နောက်ဆုံး copy အသစ်တွေကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မျိုး ရှိပြီးသားကနေအဟောင်းတွေပြန်ဆွဲတာမျိုး မလိုချင်တော့တဲ့အချိန်မှာ ရှင်းသင့်ပါတယ်။ ဝဘ်ဆိုဒ်တွေမှာ 404 error, 502 error တက်နေရင်လည်း cache တွေကိုရှင်းပေးသင့်ပါတယ်။ browser တွေရဲ့ Cache ဒေတာတွေကိုရှင်းလိုက်တဲ့အတွက် hard drive ပေါ်မှာလည်း နေရာပိုများများရသွားပါတယ်။ မရှင်းပေးရင်တော့ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ cache ရဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးလာမှာပါ။ ဒါဆို ဘယ် browser မှာ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုရှင်းမလဲ??
Google Chrome မှာတော့ Setting —> Clear browsing data ကိုသွားပါ။ Cached images and files ဆိုတာကိုရွေးပေးပြီး (ကိုယ်ဖယ်ချင်တဲ့တခြားဟာတွေရှိလည်းရွေးပေးလိုက်ပါ) CLEAR BROWSING DATA ကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
ကီးဘုတ်ကနေ အမြန်ဆုံးရှင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Ctrl+Shift+Del ကိုနှိပ်ပြီးရှင်းလိုက်ပါ။ ကီးဘုတ်မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ Menu ကိုနှိပ် (လိုင်းသုံးလိုင်း/ အစက်သုံးစက်) ပြီး More tools ကနေ Clear browsing data ကိုလုပ်ပေးလိုက်ပါ။
Chrome mobile browser မှာတော့ Setting —> Privacy—> Clear Browsing Data—> Cached Images and Files —> Clear Browsing Data ကို နှိပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။
Windows ကွန်ပျူတာတွေမှာသွင်းပေးထားတဲ့ Microsoft Internet Explorer မှာတော့ Delete Browsing History—> Temporary Internet files and website files—> Delete လုပ်ရုံပါ။ အမြန်ရှင်းချင်ရင်တော့ ခုနကအတိုင်း Ctrl+Shift+Del ပါ။ နောက်တစ်နည်းကတော့ Tools(gear icon) —> Safety—> Delete browsing History ကိုနှိပ်ရုံပါပဲ။
Mozilla’s Firefox browser မှာတော့ Clear Recent History ကနေ Cache—> Clear Now လုပ်ရင်ရပါပြီ။
** အချိန်အကန့်အသတ်ကိုရွေးခိုင်းတဲ့အခါမှာ “Everything” ကိုရွေးပေးမှရပါမယ်။ ဒါမှ history တစ်ခုလုံးပျက်သွားမှာပါ။
Mobile App မှာတော့ ညာဘက်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ Menu ကနေ Setting—> PRIVACY—> Cache —> Clear Private Data ဆိုရင် ရပါပြီ။ Firefox Focus မှာဆိုရင်တော့ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်မှာရှိတဲ့ ERASE button ကိုနှိပ်ဖျက်လိုက်ရင်ရပါပြီ။
Apple’s Safari browser မှာတော့ Develop menu ကနေ Develop —> Empty Caches လုပ်ပေးပါ။ ကီးဘုတ်ကနေဆိုရင်တော့ Option-Command-E ဆိုတဲ့ shortcut key တွေတွဲနှိပ်ပေးလိုက်ရင် ရပါတယ်။
** Safari menu bar မှာ develop ဆိုတာကို မတွေ့ရင်တော့ Preferences, Advanced, Show Develop menu in menu bar ကိုရွေးပေးပါ။
မိုဘိုင်းလ် Safari browser မှာတော့ ဖုန်းရဲ့ Setting —> Safari —> အောက်ဆုံးထိဆွဲချပြီး Clear History and Website Data ကိုနှိပ်ပြီး ရှင်းလိုက်လို့ရပါတယ်။
Browser ရဲ့ Setting —> Clear browsing data—> Cached images and files —> Clear browsing data ကိုသွားရှင်းပါ။ သူလည်း Ctrl+Shift+Del ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ အချိန်ကိုရွေးတဲ့အခါမှာ “the beginning of time” ကို ရွေးပေးမှ အကုန်ပျက်မှာပါ။
မိုဘိုင်းလ် Opera မှာလည်း အောက်ခြေက menu ကနေ Opera icon ကို နှိပ်ပြီး Setting —> Clear ကနေ saved passwords, browsing history, cookies and data စသဖြင့်ကိုယ်ဖျက်ချင်တာတွေကို ရွေးဖျက်လိုက်ပါ။
Window ဗားရှင်းအသစ်တွေမှာပါတဲ့ Microsoft’s Edge browser မှာတော့ Clear browsing data menu—> Cached data and files —> clear ကိုနှိပ်ပါ။ အရင်လို Ctrl+Shift+Del နှိပ်လည်းရပါတယ်။ နောက်တစ်မျိုးက Setting —> More —> Clear browsing data —> Choose what to clear ကိုသွားရွေးဖျက်လိုက်လို့ရပါပြီ။
မိုဘိုင်း Edge browser မှာတော့ Setting—> Privacy —> Clear Browsing data ကိုသွားပြီး ရှင်းချင်တာတွေသာရွေးပေးလိုက်ပါ။
Browser တိုင်းမှာ cache data တွေကို ရှင်းလို့ရနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေအားလုံးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါပြီ။ ကိုယ်သုံးတဲ့ browser ကိုလိုက်ပြီး ရှင်းသင့်တာတွေ ရှင်းလိုက်ရအောင်….
ဘယျ Browser တိုငျးမှာမဆို Setting ရဲ့ Privacy or History ကနေ ဝငျပွီး cache တှကေို ဖကျြပဈလိုကျလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘာလို့ cache တှေ ရှငျးပေးဖို့လိုတာလဲ?? Cache ဆိုတာဘာလဲဆိုတာတှနေဲ့ ဘယျလိုရှငျးပေးရမလဲဆိုတာတှကေို browser တဈခုခငျြးစီလိုကျပွီး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
Browser ရဲ့ Cache ဆိုတာကလညျး ကိုယျဝငျကွညျ့ဖူးတဲ့ ဝဘျဆိုဒျတှကေ စာတှေ ပုံတှနေဲ့ သူ့မှာပါတဲ့တခွားသော content တှအေကုနျလုံးကို စုထားပွီး ကှနျပြူတာရဲ့ hard drive ဒါမှမဟုတျ ဖုနျးမှာဆို storage မှာသှားသိမျးထားတာပါ။
ဝဘျပခြေျ့တှရေဲ့ copy က ကိုယျ့ device ထဲမှာရှိနတေဲ့အတှကျ နောကျတဈကွိမျ အဲဒီဝဘျဆိုဒျကိုဝငျတဲ့အခါမှာ အငျတာနကျကနေ နောကျတဈခါထပျဒေါငျးလုပျခစြရာမလိုဘဲနဲ့ ဖုနျးသို့မဟုတျ ကှနျပြူတာကနပေဲ ပွနျ load လုပျသှားတဲ့အတှကျ ဝငျရတာမကွာတော့ပဲ မွနျသှားပါတယျ။
Cache တှကေို ဘယျခြိနျရှငျးမလဲဆိုတော့ ကိုယျက ဒီဝဘျဆိုဒျကနေ နောကျဆုံး copy အသဈတှကေိုလိုခငျြတဲ့အခြိနျမြိုး ရှိပွီးသားကနအေဟောငျးတှပွေနျဆှဲတာမြိုး မလိုခငျြတော့တဲ့အခြိနျမှာ ရှငျးသငျ့ပါတယျ။ ဝဘျဆိုဒျတှမှော 404 error, 502 error တကျနရေငျလညျး cache တှကေိုရှငျးပေးသငျ့ပါတယျ။ browser တှရေဲ့ Cache ဒတောတှကေိုရှငျးလိုကျတဲ့အတှကျ hard drive ပျေါမှာလညျး နရောပိုမြားမြားရသှားပါတယျ။ မရှငျးပေးရငျတော့ အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ cache ရဲ့ ဖိုငျဆိုဒျကွီးလာမှာပါ။ ဒါဆို ဘယျ browser မှာ ဘယျကနေ ဘယျလိုရှငျးမလဲ??
Google Chrome မှာတော့ Setting —> Clear browsing data ကိုသှားပါ။ Cached images and files ဆိုတာကိုရှေးပေးပွီး (ကိုယျဖယျခငျြတဲ့တခွားဟာတှရှေိလညျးရှေးပေးလိုကျပါ) CLEAR BROWSING DATA ကို နှိပျလိုကျရငျ ရပါပွီ။
ကီးဘုတျကနေ အမွနျဆုံးရှငျးခငျြတယျဆိုရငျတော့ Ctrl+Shift+Del ကိုနှိပျပွီးရှငျးလိုကျပါ။ ကီးဘုတျမသုံးဘူးဆိုရငျတော့ Menu ကိုနှိပျ (လိုငျးသုံးလိုငျး/ အစကျသုံးစကျ) ပွီး More tools ကနေ Clear browsing data ကိုလုပျပေးလိုကျပါ။
Chrome mobile browser မှာတော့ Setting —> Privacy—> Clear Browsing Data—> Cached Images and Files —> Clear Browsing Data ကို နှိပျလိုကျရငျ ရပါပွီ။
Windows ကှနျပြူတာတှမှောသှငျးပေးထားတဲ့ Microsoft Internet Explorer မှာတော့ Delete Browsing History—> Temporary Internet files and website files—> Delete လုပျရုံပါ။ အမွနျရှငျးခငျြရငျတော့ ခုနကအတိုငျး Ctrl+Shift+Del ပါ။ နောကျတဈနညျးကတော့ Tools(gear icon) —> Safety—> Delete browsing History ကိုနှိပျရုံပါပဲ။
Mozilla’s Firefox browser မှာတော့ Clear Recent History ကနေ Cache—> Clear Now လုပျရငျရပါပွီ။
** အခြိနျအကနျ့အသတျကိုရှေးခိုငျးတဲ့အခါမှာ “Everything” ကိုရှေးပေးမှရပါမယျ။ ဒါမှ history တဈခုလုံးပကျြသှားမှာပါ။
Mobile App မှာတော့ ညာဘကျအောကျခွမှောရှိတဲ့ Menu ကနေ Setting—> PRIVACY—> Cache —> Clear Private Data ဆိုရငျ ရပါပွီ။ Firefox Focus မှာဆိုရငျတော့ ညာဘကျအပျေါထောငျ့မှာရှိတဲ့ ERASE button ကိုနှိပျဖကျြလိုကျရငျရပါပွီ။
Apple’s Safari browser မှာတော့ Develop menu ကနေ Develop —> Empty Caches လုပျပေးပါ။ ကီးဘုတျကနဆေိုရငျတော့ Option-Command-E ဆိုတဲ့ shortcut key တှတှေဲနှိပျပေးလိုကျရငျ ရပါတယျ။
** Safari menu bar မှာ develop ဆိုတာကို မတှရေ့ငျတော့ Preferences, Advanced, Show Develop menu in menu bar ကိုရှေးပေးပါ။
မိုဘိုငျးလျ Safari browser မှာတော့ ဖုနျးရဲ့ Setting —> Safari —> အောကျဆုံးထိဆှဲခပြွီး Clear History and Website Data ကိုနှိပျပွီး ရှငျးလိုကျလို့ရပါတယျ။
Browser ရဲ့ Setting —> Clear browsing data—> Cached images and files —> Clear browsing data ကိုသှားရှငျးပါ။ သူလညျး Ctrl+Shift+Del ကိုသုံးလို့ရပါတယျ။ အခြိနျကိုရှေးတဲ့အခါမှာ “the beginning of time” ကို ရှေးပေးမှ အကုနျပကျြမှာပါ။
မိုဘိုငျးလျ Opera မှာလညျး အောကျခွကေ menu ကနေ Opera icon ကို နှိပျပွီး Setting —> Clear ကနေ saved passwords, browsing history, cookies and data စသဖွငျ့ကိုယျဖကျြခငျြတာတှကေို ရှေးဖကျြလိုကျပါ။
Window ဗားရှငျးအသဈတှမှောပါတဲ့ Microsoft’s Edge browser မှာတော့ Clear browsing data menu—> Cached data and files —> clear ကိုနှိပျပါ။ အရငျလို Ctrl+Shift+Del နှိပျလညျးရပါတယျ။ နောကျတဈမြိုးက Setting —> More —> Clear browsing data —> Choose what to clear ကိုသှားရှေးဖကျြလိုကျလို့ရပါပွီ။
မိုဘိုငျး Edge browser မှာတော့ Setting—> Privacy —> Clear Browsing data ကိုသှားပွီး ရှငျးခငျြတာတှသောရှေးပေးလိုကျပါ။
Browser တိုငျးမှာ cache data တှကေို ရှငျးလို့ရနိုငျမယျ့နညျးလမျးတှအေားလုံးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါပွီ။ ကိုယျသုံးတဲ့ browser ကိုလိုကျပွီး ရှငျးသငျ့တာတှေ ရှငျးလိုကျရအောငျ….